शैक्षिक समीक्षा – मझेरी डट कम
हरेक शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीहरू असल बनून भन्ने चाहन्छन् अनि हरेक अभिभावकले पनि आफ्ना सन्तानहरू राम्रा बनून भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविकै हो तर आज ती कोमल मस्तिष्कका बालबालिकाहरूलाई हामीले कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौं, त्यो पक्ष विचारणीय छ । एउटा बिरुवा रोपेपछि त्यसलाई सप्रनका लागि नियमित रूपमा मलजल गर्नु पर्ने हुन्छ तर त्यो मलजल हामीले बिरुवाको जरामा गर्नुको साटो बिरुवाको पातमा हालेर हुँदैन । बिरुवाको जरामा मलजल गर्नु र पातमा गर्नु धेरै फरक पर्छ ।
वि.सं. २०६४ को आशपासमा मैले धरती स्पर्श गर्दा देश संवैधानिक राजतन्त्र त्यागेर गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत भएको प्रशव व्यथा आलै रहेछ । दुई शताब्दीभन्दा बढी राजतन्त्रको कथाव्यथा खेप्ताखेप्ता आजित जनता पुनः आफ्नै नेतानेतृको वैयक्तिकस्वार्थको दुष्चक्रमा पस्न पुगेछन् । राजतन्त्रसँगको अधिकारवादी लडाइँले निकास पाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पनि राज्यसञ्चालनमा जनताले अपनत्वको भावना अनुभूत गर्न सकेका रहेनछन् ।
श्रीशिक्षकज्यू ! आज अचाक्ली मन दुखेको छ । सारा सपनाहरू तुहेर जालान् भनी डरले मुटु काप्न थालेको छ । अबको सहरा केवल तपाईं नै हुनुहुन्छ भनी लेख्न बसेको छु । यो विश्वास र भरोसा मैले कसैबाट सिकेको हैन, अभिभावककै हैसियतले अनुभूत गरेको हुँ । आशा छ, मैले तपाईंमाथि राखेका अपेक्षा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकिरहने छैन ।
महाभारतको छैटौँ भीष्म पर्वमा भागवत् गीताको चर्चा गरिएको छ । युद्ध मैदानमा खडा भएका अर्जुन आफ्ना मान्यजन र प्रियजनको बध गर्नुपर्ने अवस्था देखेर युद्ध विमुख हुन्छन् । उनी यस्तो युद्धलाई व्यापारको संज्ञा दिन्छन् । र, युद्धबाट विजेता बने पनि आफन्तको लासमाथि टेकेर आर्जेको साम्राज्यले कहिल्यै सुख–चयन नदिने कुरा गर्छन् । अन्ततः कृष्णले महाभारत युद्धलाई धर्मयुद्धका रूपमा व्याख्या गर्छन् । गुरु र शिष्य संवादका रूपमा लेखिएको हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ विशेषलाई गीता भनिन्छ । जस्तै– शिव गीता, राम गीता, भागवत् गीता आदि । यसमा जीवनको साङ्गोपाङ्गो पक्षको शाश्वत बोध गराएर कृष्णले अर्जुनको चक्षु खोलिदिएका छन् ।
नेपालको शिक्षा मुठ्ठीभर व्यक्तिको कब्जाबाट गुज्रँदै आएको छ । आदिकालमा गुरुकूल पद्धतिको शिक्षा केही धनाढ्य व्यक्ति र गुरुहरूको हातमा थियो । राणाकालमा राणाहरूका भाइभारदार, आगेपाछे र चाकरीबाजकहाँ गयो । अवस्था सुध्रँदै आएको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दल र तिनको भरणपोषण गर्नेहरूको हातमा सर्यो । पश्चिमका अङ्ग्रेजहरूले दासमनोदशाका नागरिक उत्पादन भइरहून् भनेर भारतमा छाडी गएको शैक्षिक पद्धतिको अन्धाधुन्धीकरण गरेर हामीले हाम्रो मौलिक शैक्षिक पद्धति आर्यघाटमा पुर्यायौँ ।
समयसँग लडाइँ गर्दागदै विज्ञान सङ्कायमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम भएर स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेँ । मेरो परिवारमा खुशी नाच्न थाल्यो । म भने परीधीय मुस्कुराहट देखाएर साथ दिन थालेँ । उपाधिको भारले म थिचिएँ । आफूमा भएको स्वच्छन्दतालाई भित्रभित्रै दबाएर भद्र व्यक्तिमा रूपान्तरण हुने प्रयासमा लाग्दो भएँ ।
म कण्ठ गर्न माहिर थिएँ । एम.एस्सी.का सबैजसो पाठ्यपुस्तकहरू कण्ठ थिए । कतिपय कुरा बुझेको थिएँ । कतिपय भने नबुझीकनै मुखाग्र मात्रै थिए । प्रयोगशालामा समेत प्रमाणित गर्न सक्तिनथेँ । सिद्धान्तलाई व्यवहारबाट परीक्षण गरी सिद्ध गर्न नसके त्यसलाई विज्ञान भन्ने पक्षमा थिइनँ । संसारका लागि म गोल्डमेडलिष्ट थिएँ । तर, आफ्ना लागि कनिकुथी तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्ने तल्लो स्तरको सिकारु नै थिएँ ।
प्रा.डा. केआर खम्बु
घरको बोलाउनु नाम	ः	काशीराम राई
जन्मको नाम	ः कमल राई
मास्टरले लेख्न नजानेर काशीरालाई कालीराम लेखिदिएको र पछि यो नराम्रो सुनिएको हुँदा कालुराम का रुपमा परिवर्तन गरिएको । यही नाम केआर खम्बूका रुपमा पछि परिचित ।
जन्म ः २०१४।४।५
जन्मस्थानः खोटाङ, दमर्खु, शिवालय १, चुम्लुङ ।
पिताः स्व. विष्णुध्वज राई
माताः स्व. लीलावती राई कान्छो छोरा ।
अक्षरारम्भ पहाडको गाउँकै धुले पाठशालाबाट ।
२०२० सालमा झापा गौरीगञ्जको कोरोबारी टटुवामारीस्थित जनता प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा एकमा भर्ना भएर त्यहींबाट औपचारिक शिक्षा आरम्भ र त्यस विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्मको अध्ययन ।
यम पी. भुसाल
हामी २१औँ सताब्दीको प्रविधि हस्तक्षेप र विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरुप परिवर्तन वा यथास्थितिको तनावमा छौँ । दुनियाँ क्षणभरमै ठूलो परिवर्तन र छलाङ मार्दै अघि बढेको छ । यस्ता परिवर्तनहरू प्रविधियुक्त गुणस्तरीय शिक्षामार्फत् सम्भव भएका दृष्टान्त विकसित देशहरुबाट हेर्न र ग्रहण गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रलाई अहिलेको विश्वले लगभग विकल्पहीन शासन व्यवस्था मानेर राज्यव्यवस्थाहरू चलेका छन् । विधिको शासन (rule of law) र योग्यताक्रम (merit) लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । तर पछिल्लो १ दशक नेपालमा आरक्षण र समावेशीतालाई सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लागि लोकतन्त्रकै नाममा प्रयोग गरिएको छ ।
म सानो छँदा हाम्रो बाले दूध खानलाई एउटा गाई किनेर ल्याउनु भएको थियो । त्यस गाईलाई दुहुनु अगाडि मीठामीठो घाँस दिएर अघाउँजी पार्नुपर्थ्यो । अगाडि नै घाँस र खोले नदिएमा दूध दुहुन दिँदैनथ्यो । बिहान व्यूँझिने बित्तिकै गोठ पुग्नुहुन्थ्यो र गाईलाई घाँस हालिदिनु हुन्थ्यो । दुहुने बेलासम्म गाईलाई अघाउँजी पारेन भने बाँच्छालाई नै दूध दिँदैनथ्यो । कहिलेकाहीँ गाईले दूध दुहुन दिई नै हाल्यो भने पनि थुनबाट एकथोपो दूध आँउदैनथ्यो । अनि बा रीसले बम्किनु हुन्थ्यो –“साँडीले दूध लुकाइ हाल्यो नि ।” दाजुको दुहुने पालीमा त दूध लुकाउँदाखेरि ढुङ्गैढुङ्ग्राले कुटेर गाईलाई गाली बक्नुहुन्थ्यो –“अलच्छिनी पड्के । त्यत्रो पैसाओइर्याएर ल्याएको दूध लुकाएर मर्छ ।”
मेरो नजरमा विद्यार्थीले तोकिएका कुराहरू समेटिएको पुस्तक मात्रै पढ्नै पर्छ भन्ने छैन । त्यसकै आधारमा फरक जानकारी लिन सकिन्छ । सबै प्रश्नको एक नासको उत्तर हुनुपर्छ भन्ने छैन । प्रश्नको प्रकृति र परिवेशअनुसार फरक धारको उत्तर पनि हुन सक्छ । अत: म उत्तरकुञ्जिकालाई अन्धाधुन्ध स्वीकार्ने पक्षमा छैन । प्रत्येक सिकारुमा फरकफरक प्रतिभा मडारिइरहेको हुन्छ । आफ्नो बौद्धिकताको भारी बिसाएर त्यसको मुण्टो निमोठ्ने अपराध गर्न चाहन्न । यसको अर्थ म कक्षामा पढाउन हैन समय कटाउन जान्छु भन्ने अर्थ बुझ्नु हुन्न । म त उनीहरूको सहयोगी मित्र भएर जान्छु ।
पढेलेखेका मानिस जुत्ता सिउन मन गर्दैनन् किन ? मोटर वा छाता बनाउन चाहँदैनन् किन ? विद्वान् मानिस बिग्रिएका ग्याँस, प्रेसरकुकुर बनाउन चटपटी, खरभुजा र काँक्रो बेच्न, साइकल साथै मोटर साइकलका ग्यारेजहरू संचालन गर्न चाहदैनन् किन ? उत्तर स्पष्ट छ । पढेपछि सानोतिनो काम गर्नु हुँदैन भन्ने गरिब नेपाली संस्कार जो हामीमा झुन्डिएको छ । झुर मानसिकता र प्रमाणपत्रहरू काखी च्यापेर हामी पढेका भनिएका मानिसहरू बाँचिरहेका छौं । यो खराब मानसिकता हो । तर कुरो यसो होइन ।
शिक्षा शब्द सुन्दा नै गहन छ । वास्तवमा विद्यालय, महाविद्यालय तथा घरमै बसेर पनि अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने तथा ज्ञान लिने अर्थले बुझ्न सकिन्छ । किनकि शिक्षा हाँसिल गर्न विद्यालय महाविद्यालय गएर नै हुन्छ भन्ने छैन । घरमै बसेर स्वअध्ययन गरेर पनि शिक्षा हाँसिल गर्न सकिन्छ । घरमा बसेर स्वअध्ययन गर्दा र विद्यालयमा गएर शिक्षा हाँसिल गर्दा प्रमाणिकमा फरक भने अवश्य पर्दछ । विद्यालयमा अध्ययन गर्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भने स्वअध्ययन जे जति ज्ञान हाँसिल गरे पनि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिदैन । ज्ञानी बन्नको लागि स्वअध्ययनले पनि मानिसलाई उच्चाइमा पुर्याउँछ ।
सम्पादकज्यू, म लगायत सयौं नागरिक अन्यायमा परेको एउटा प्रसङ्ग कोट्याउँदै छु । यसलाई नाटकीय ढङ्गले हुबहु समेट्दा श्रेयष्कर होला भन्ठान्छु ।
‘हेलो ! यो शिक्षा सेवा आयोग हो ?’
‘हो, भन्नुस् । के भन्नुछ । चाँडो भन्नुस् ।’
‘नमस्कार ! म सप्तरीबाट बोल्दै छु । मैले अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको परिणामबाट असन्तुष्ट भई पुनर्योगका लागि निवेदन दिएको थिएँ । त्यसको रिजल्ट अहिलेसम्म नपाउँदा अन्यौलमा छु । कहिले रिजल्ट होला ?’
नेपाल वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा जगत्को सुधारका लागि हालै एउटा प्रतिबद्धता–पत्र जाहेर गरेका छन् जसमा भनिएको छ– ‘नेपालमा सदियौंदेखि सामन्ति शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन तथा सामाजिक विभेदमा परेका नेपाली जनताको निरन्तर संघर्ष तथा बलिदानबाट स्थापित संविधानसभामार्फत् नेपालको संविधान घोषणा भए सँगसँगै राजनैतिक रुपमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न तथा नेपाली समाजलाई नयाँ नेपालको आलोकमा रुपान्तरण गर्न शिक्षा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको छ । त्यसैले नयाँ संविधान घोषणा भए पछिको पहिलो शिक्षामन्त्रीका हैसियतले न्यायपूर्ण, समानता तथा समतामुलक शिक्षा प्रणालीको स्थापना गरी गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धात्मक, जनमुखी, रोजगार मुलक बहुप्राविधिक, व्यवसायिक शिक्षालाई लागू गर्ने ध्येय उद्देश्यका साथ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले यो प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको छ ।’